HAMAKY AMIN'NY TENY Afrikaans Albaney Alemà Amharique Anglisy Arabo Armenianina Armenianina (Andrefana) Aymara Azerbaijaney Azerbaijaney (Sirilika) Bengali Bichlamar Bicol Boligara Catalan Cebuano Chichewa Chitonga Chitumbuka Cinghalais Dangme Danoà Drehu Efik Espaniola Estonianina Failandey Fidjianina Frantsay Ga Goujrati Goun Grika Groenlandey Guarani Géorgien Hebreo Hiligaynon Hindi Holandey Hongroà Ibo Icibemba Iloko Indonezianina Iokrenianina Islandey Italianina Japoney Kambôdzianina Kannada Kantôney Nentim-paharazana Kazakh Kikaonde Kikuyu Kiluba Kimbundu Kinyarwanda Kirghiz Kirundi Kongo Koreanina Kreôla any Haïti Kreôla any Seychelles Krio Kroaty Kwangali Kwanyama Letonianina Lingala Litoanianina Luganda Lunda Luo Luvale Malagasy Malayalam Malezianina Maltais Mandarin Nentim-paharazana Mandarin Notsorina Marathe Masedonianina Maya Mizo Nahuatl (Puebla Avaratra) Ndebele Ndonga Ngabere Norvezianina Nzema Népali Oromo Ossète Otetela Ourdou Ouzbek Pangasinan Papiamento (Aruba) Papiamento (Curaçao) Pendjabi Persianina Poloney Portogey (Brezila) Quechua (Ancash) Quechua (Ayacucho) Quechua (Bolivia) Quechua (Cuzco) Rarotonga Romanianina Rosianina Samoanina Sango Sepedi Serba (Sirilika) Serba (Soratra Romanina) Sesotho (Lesotho) Setswana Shona Silozi Sinoa Kantôney Notsorina Slovaky Slovenianina Soedoà Sranan Tongo Swahili Swahili (Congo) Swati Tagalog Tahisianina Tailandey Tamoul Tatar Tetun Dili Tigrigna Tiorka Tiv Totonac Tseky Tshiluba Tsonga Tuvalu Twi Tzotzil Télougou Venda Vietnamianina Wallis Waray-Waray Wolaita Xhosa Yorobà Zoloa Éwé
NIALA tany Babylona ny vahoakan’Andriamanitra tamin’ny 537 T.K. mba hody any Jerosalema. Hoy i Jehovah tamin’izy ireo talohan’ilay dia: “Karakarao ny lalan’ny olona! Manamboara, manamboara lalambe! Esory ny vato eny.” (Isaia 62:10) Ahoana no nanaovan’ny Jiosy an’izany? Mety ho nisy antokon’olona nandeha mialoha mba hanamboatra lalana. Angamba izy ireo nanototra ny lavaka sy nandravona ny mikitoantoana. Mora kokoa ho an’ny hafa avy eo ny nandeha tamin’ilay lalana.
Toy ny mandeha amin’ny lalana iray koa isika, rehefa manatratra tanjona ara-panahy. Tsy tian’i Jehovah ho voahelingelin’ny zavatra tsy dia ilaina isika, rehefa mandeha amin’io lalana io. Hoy àry izy: “Ataovy mitovy tantana izay hodiavin’ny tongotrao, ary aoka ho azo antoka tsara ny lalanao rehetra.” (Ohab. 4:26) Fahendrena ny manaraka an’io torohevitra io, na tanora isika na tsia.
MANDRAISA FANAPAHAN-KEVITRA TSARA
Angamba ianao efa naheno olona nilaza hoe: ‘Tena mahay ity ankizy ity!’, na hoe: ‘Ho lasa lavitra io ankizy io!’ Matetika ny tanora no salama tsara sy mahira-tsaina ary tena te hahomby amin’izay ataony. Marina ny voalazan’ny Baiboly hoe: “Ravaky ny tanora ny tanjany.” (Ohab. 20:29) Hahavita hanatratra tanjona ara-panahy sy tena ho sambatra ny tanora, raha mampiasa ny talentany sy ny heriny mba hanompoana an’i Jehovah.
Sarobidy amin’ity tontolo ity koa ny fahaizan’ny tanora Vavolombelona. Mety hampirisika azy ireo hanao fianarana ambony ny mpampianatra sy ny mpiara-mianatra, raha mahay izy any am-pianarana. Heveriny fa izay no hahatafita azy. Mety hisy hampirisika an’ilay tanora hanao ny spaoro ho anton’asa koa, raha havanana amin’izany izy. Efa nitranga taminao na tamin’ny tanora fantatrao ve izany? Inona no hanampy ny Kristianina hahay hisafidy?
Hahatratra tanjona faran’izay tsara ny olona manaraka ny toro lalan’ny Baiboly. Hoy, ohatra, ny Mpitoriteny 12:1: “Tsarovy ilay Mpamorona Be Voninahitra nanao anao. Eny, tsarovy izy amin’ny andro fahatanoranao.” Ahoana no azon’ny tanora sy ny olon-kafa ampiharana an’izany?
Diniho izay nitranga tamin’i Eric, * atsy Afrika Andrefana. Tia nilalao baolina kitra izy, ary voafidy ho anisan’ny ekipam-pirenena tamin’izy 15 taona. Nety ho nalefa tany Eoropa mba hahazo fiofanana avo lenta izy tsy ela taorian’izay, ka angamba ho lasa mpilalao baolina matihanina. Ahoana anefa no nampiharany an’ilay torohevitra hoe ‘tsarovy ilay Mpamorona anao’? Inona no azontsika ianarana avy amin’ny tantarany?
Nianatra Baiboly tamin’ny Vavolombelon’i Jehovah i Eric, tamin’ny mbola nianatra. Lasa fantany fa hamaha tanteraka ny olana eto an-tany ny Mpamorona. Tsapany fa ilainy ny mampiasa ny fotoanany sy ny heriny mba hanaovana ny sitrapon’Andriamanitra. Tsy nifidy ny ho mpilalao baolina àry izy. Natao batisa kosa izy ary nampiasa ny heriny sy ny fotoanany hanompoana an’i Jehovah. Lasa mpanampy amin’ny fanompoana izy, ary nanatrika ny Sekoly Ara-baiboly ho An’ny Rahalahy Mpitovo.
Nety ho nalaza sy nanan-karena i Eric, raha nataony anton’asa ny spaoro. Takany anefa fa marina ny voalazan’ny Baiboly hoe: “Amin’ny mpanana dia toy ny tanàna voaro mafy ny harenany. Heveriny fa manda fiarovana izany.” (Ohab. 18:11) Mety hihevitra ny olona hoe miaro azy ny harenany, nefa tsy tena voaro akory izy. Matetika koa ny olona mikatsaka harena no ‘manindrona ny tenany amin-javatra maro mampanaintaina.’—1 Tim. 6:9, 10.
Faly sy milamin-tsaina kosa ny tanora maro, satria nifidy ny hanompo manontolo andro. Hoy i Eric: “Lasa anisan’ny ‘ekipa’ lehibe misy an’ireo mpanompo manontolo andro aho. Io no ekipa tsara indrindra. Misaotra an’i Jehovah aho fa natorony ahy izay tena mahasambatra sy mahafa-po.”
Ary ahoana ny aminao? Nahoana raha misafidy lalana hanampy anao hanompo bebe kokoa an’i Jehovah, fa tsy variana manatratra tanjona eto amin’ity tontolo ity? Nahoana raha miezaka mba ho mpisava lalana?—Jereo ilay efajoro hoe “ Soa Tsy ho Azonao eny Amin’ny Oniversite.”
ESORY IZAY MANAKANTSAKANA
Nieritreritra ny mpivady iray hoe efa nety taminy ny fiainany. Nitsidika ny Betelan’i Etazonia anefa izy ireo, ary nahita fa sambatra ireo Betelita manompo ao. Nanapa-kevitra àry izy mivady fa hampiasa ny fotoanany sy ny heriny mba hanompoana an’i Jehovah bebe kokoa.
Nieritreritra izy ireo hoe tsy ho vitany ny hanova ny fiainany. Nisaintsaina ny Jaona 8:31 anefa izy ireo indray mandeha, satria io no andinin-teny ho an’ny andro. Hoy i Jesosy ao: “Raha tsy miala amin’ny teniko ianareo dia tena mpianatro tokoa.” Nino àry izy ireo fa tsy ho very maina ny ezaka ataony mba hanatsorana ny fiainany, na dia misy zavatra tsy maintsy afoy aza. Namidiny ny tranobeny, nesoriny izay nanelingelina azy, ary nifindra tany amin’ny fiangonana nila fanampiana izy. Mpisava lalana izy roa izao, manampy amin’ny fanorenana Efitrano Fanjakana, ary manao asa an-tsitrapo amin’ny fivoriamben’ny vondrom-paritra. Hoy izy roa: “Gaga izahay fa mahafinaritra be ny manana fiainana tsotra, ary izany mihitsy no asain’ny fandaminan’i Jehovah atao.”
Hoy i Solomona: “Aoka ny masonao hijery tsara ny any aloha, eny, aoka ny masonao hibanjina ny eo anoloanao.” (Ohab. 4:25) Mila mifantoka amin’ny lalana eo alohany ny mpamily. Toy izany koa fa mila mitandrina isika sao ho variana amin-javatra hafa, ka tsy hiezaka hanana tanjona ara-panahy sy hanatratra azy ireny.
Inona no tanjona azonao tratrarina? Tena tsara, ohatra, ny miezaka hanompo manontolo andro. Azo atao koa ny mifindra any amin’ny fiangonana vitsy mpitory nefa manana faritany midadasika. Ny rahalahy indray afaka manampy fiangonana manana mpitory maro nefa tsy ampy anti-panahy sy mpanampy amin’ny fanompoana. Miresaha amin’ny mpiandraikitra ny faritra, raha maniry handray anjara amin’ireo ianao. Ary raha te hanompo any amin’ny toerana lavitra kokoa ianao? Mangataha fanazavana momba an’ireo fiangonana lavitra mila fanampiana. *
Hiverenantsika kely ny voalazan’ny Isaia 62:10. Niasa mafy angamba ny Jiosy sasany, mba hampitovy tantana ny lalana sy hanala an’ireo sakantsakana, ka ho tafody soa aman-tsara ny vahoakan’Andriamanitra. Aza kivy àry fa miezaha mafy foana hanatratra ny tanjonao eo amin’ny fanompoana masina. Hanampy anao i Jehovah, ka ho tratranao ny tanjonao. Mangataha fahendrena aminy rehefa miezaka manala an’izay manakantsakana ny lalanao ianao. Ho hitanao fa hanampy anao izy mba ‘hampitovy tantana an’izay hodiavin’ny tongotrao.’—Ohab. 4:26.
^ feh. 8 Novana ny anarana.
^ feh. 18 Jereo ny boky Voalamina mba Hanao ny Sitrapon’i Jehovah, pejy 111-112.
Soa Tsy ho Azonao eny Amin’ny Oniversite
NIRESAKA Baiboly tamin’i Flavia ny bebeny, tamin’izy mbola kely. Vavolombelon’i Jehovah ilay bebeny. Mpampianatra anefa ny dadany, ary nampirisika azy hianatra momba ny zavaboary sy hanao fianarana ambony. Nisy olona koa nilaza taminy hoe: “Ho afaka hanavotra ny tany tsy ho potika ianao sy ny tanora toa anao.” Nampian’ny dadany i Flavia, ka nianatra tany amin’ny oniversite malaza. Nikaroka fomba fanamboarana solika tsy manimba ny tontolo iainana izy tany.
Hitan’i Flavia anefa fa tsy te “hanavotra ny tany” akory ny mpianatra maro. Nisy fikambanana koa namatsy vola ny oniversite mba hanaovana fikarohana sasany, ka ny tombontsoan’ireny fikambanana ireny no nimasoan’ny mpikaroka indraindray. Tsy neken’ny sain’i Flavia izany. Nahaliana azy indray àry izay lazain’ny Baiboly momba an’Andriamanitra sy ny hoavy, rehefa nisy Vavolombelon’i Jehovah nitsidika azy.
Nanaiky ny fahamarinana i Flavia ary natao batisa. Tsy nanam-potoana firy hitoriana ny vaovao tsara anefa izy, satria nianatra be mba hahazo diplaoma ambony. Nanazava ny Jakoba 4:17 ny mpiandraikitra ny faritra indray mandeha. Voalaza ao hoe: “Raha misy mahafantatra izay tokony hataony, nefa tsy manao, dia manota izy.” Nampieritreritra an’i Flavia izany. Hoy izy: ‘Sady te hotahin’i Jehovah aho no te ho lasa mpahay siansa. Tsy maintsy nisafidy aho.’
Nanapa-kevitra i Flavia fa tsy hanohy ny fianarany teny amin’ny oniversite. Nanenina ve izy? Hoy izy:
“Nandray soa be dia be aho nanompo an’i Jehovah, ary tsy ho azoko teny amin’ny oniversite mihitsy izany. Tsara fanahy tamiko izy. Nampianatra ahy izy mba ho tsara fanahy sy ho be fitiavana ary hanampy ny hafa hifandray aminy. Sambatra am-panambadiana aho, ary tsara lavitra noho izay ampanantenain’ny siansa ny hoaviko. I Jehovah ihany no afaka manavotra ny tany, ka tsy hanao tsinontsinona azy aho.” Manompo any amin’ny foiben’ny Vavolombelon’i Jehovah any New York izao i Flavia sy ny vadiny.
Hizara Hizara “Ataovy Mitovy Tantana Izay Hodiavin’ny Tongotrao”